छिमेकी देश चीनबारेका १३ रोचक कुरा ! - Himalayan Kangaroo
छिमेकी देश चीनबारेका १३ रोचक कुरा !
Posted by Himalayan Kangaroo | २६ मंसिर २०७४, मंगलवार ०९:०४ |
काठमाडौं । द्रुत गतीमा विकास भइरहेको देशको रुपमा चीनलाई हेरिन्छ । नेपालमा कम्युनिष्टहरुको सरकार बन्ने संकेत हुँदै गर्दा, चीनसंग नेपालको सम्बन्ध अझ विस्तार हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । यहाँ त्यही शक्तिशाली छिमेकी देश ‘चीन’ को बारेमा केही रोचक तथ्य समावेश गरिएको छ :
१) अमेरिकाले सय वर्षमा जति सिमेन्टको प्रयोग गरेको थियो, चीनले त्यो भन्दा पनि धेरै सिमेन्ट सन् २०११ देखि २०१३ को बीचमा प्रयोग गरेको थियो । चीनले यी तीन वर्षभित्र ६,६१५ मिलियन टन सिमेन्टको प्रयोग पूर्वाधार विकासमा लगाएको थियो ।
२) २००० ईसा पूर्वको आसपास आईस्क्रिमक खोज सबैभन्दा पहिले चीनमै भएको थियो । पहिलो आइस्क्रिम दूध र चामल मिसाएर बनाइएको थियो ।
३) नेपाल भन्दा ६७ गुणा ठुलो भए पनि चीन एउटै मात्र टाइम जोनमा रहेको देश हो ।
४) चीनमा बढ्दो वायु प्रदुषणका कारण त्यहाँ शुद्ध हावाको क्यान बेच्न थालिएको छ। शुद्ध हवा पाँच युआन प्रति क्यान बेच्ने गरिएको छ। शुद्ध हावा तीन प्रकारका छन् । १) ‘तिब्बतको असली हावा’, २) क्रान्तिकारी याहयान र, ३) पोस्ट-इन्डस्ट्रियल ताइवान ।
५)हामीले चाउमिन या अन्य परिकारसँग खाने ससको प्रयोग पनि चीनबाटै सुरू भएको थियो । त्यसैगरी मसालेदार माछाको सस पनि यहीँको उत्पादन हो ।
६) फुटबल खेलका लागि चीनलार्इ नै श्रेय दिइन्छ। फिफाका आठौँ अध्यक्ष सेप ब्लाटरले पनि फुटबलको सुरूवातका लागि चीनलार्इ नै श्रेय दिएका थिए । विज्ञहरूका अनुसार चीनमा फुटबलको खोज दोस्रो र तेस्रो शताब्दीमा भएको थिययो ।
७) चीन आधिकारिक रूपमा नास्तिक देश हो । तर यहाँ इटलीको जनसंख्या भन्दा धेरै ईसाई धर्मावलम्बी छन् । चीनमा ईसाई धर्म मान्ने करिब ५ करोड ४० लाख मानिस रहेका छन् । जबकि इटलीमा ४ करोड ७० लाख मानिसको बसोबास छ । यही गतिमा जाने हो भने चाँडै नै चीन विश्वकै सबैभन्दा ठुलो ईसाई देश बन्न सक्नेछ ।
८) चिनिया कुकुरको पनि मासु खान्छन् । तर, केही वर्षयता यसमा व्यापक कमी आएको छ । अब चिनियाले कुकुर बिरालोलार्इ घरपालुवा जनवार बनाएर राख्न थालेका छन् । यहाँ मानिसको मन पर्ने मासु सर्पको पनि हो ।
९) चीनमा हरेक दिन औसत १७ लाख सुँगुर काटिन्छन् । चीनमा सुँगुरको मासु सबैभन्दा धेरै मन पराइन्छ । तर, थोर कमार्इ हुनेका लागि भने सुँगुरको मासु किन्न सजिलो भने छैन ।
१०) हङकङका चिनियाहरू एक एक दिन छुट्टी लिएर आफ्ना पूवर्जको चिहानको सफार्इ गर्न जाने गरेका छन् ।
११) परम्परागतरूपमा चीनका महिला रातो रंगको लुगमा बिहे गर्छन् । रातो रंगलार्इ चीनमा भाग्यमानी रंग भनिन्छ । जबकि सेतो रंगलार्इ यहाँ मृत्युको प्रतीकका रूपमा लिइन्छ ।
१२) विश्वमा रहेका हरेक पाँचजना मानिसमा एकजना चिनियाँ रहेका छन् ।
१३) सन् १९७८ मा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले पूँजीवादी बजार सिद्धान्त पेश गरेको थियो । जब १९८० को दशकमा चीनले जब आफ्नो बजार खोल्यो, तबदेखि चीन विश्वको सबैभन्दा ठुलो उत्पादक बनेको छ । चीनको अर्थव्यवस्था पछिल्लो तीन दशकबाट औसत १० प्रतिशतका दरले बढ्यो । यस्तो सन् २०१० मा रह्यो ।
Previousप्रभु साहलाई रौतहटमा ५१ किलोकोे माला
Nextमहासप्ताह विशेष: कला संस्कृतिको प्रबर्द्धन साथै नेपाली पहिचानको लागि सप्ताह र सामुदायिक भवन
हावाले पनि भाँचिन्छन् यी बालिकाका शरीरका हड्डी (भिडियो सहित )
२६ चैत्र २०७३, शनिबार ०४:५४
बालिकालाई बलात्कार गर्न खोज्ने व्यक्तिको लिंग टोकिदिने कुकुर हिरो बन्यो
१० मंसिर २०७४, आईतवार ०४:०८
शुक्रवार नेपाली आकाशमा अत्याधिक उल्कावर्षा हुने
२६ श्रावण २०७३, बुधबार १५:३९